BBB ရထားမောင်းနှင်မှုသည်ဝန်ထမ်းများအားခန့်အပ်မှုပြုပါမည်။ | RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်BBB ရထားမောင်းနှင်မှုသည်ဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားလိမ့်မည်!
19 / 11 / 2019 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ဂျော့ဘ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ
ibb ရထားမောင်းသူသည် ၀ န်ထမ်းများကို ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်
BBB Train Driver သည်ဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားလိမ့်မည်။ Istanbul Metropolitan Municipality မှအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက် IMM အလုပ်ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာ မှတဆင့်အလုပ်သစ်တင်ခြင်း။ လူတိုင်းသည်သိလိုစိတ်ပြင်းပြစွာလိုက်နေသည့် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုကြော်ငြာတစ်ခုဖြစ်သည် ရထားမောင်းသူ ဝန်ထမ်းများ reception ည့်ခံခဲ့သည်။ IMM အလုပ်ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာတွင်ထုတ်ပြန်ထားသောစုဆောင်းမှုကြေငြာချက်တွင်လျှောက်ထားသူများအားလျှောက်ထားရန်လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များကိုလည်းကြေငြာခဲ့သည်။
IMM ကပုဂ္ဂိုလ် ၀ ယ်ယူကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်
IMM မှထုတ်ဝေသောလူသစ်စုဆောင်းရေးကြေငြာချက်၌“ အစ္စတန်ဘူလ်၏ဥရောပဘက်တွင်နေထိုင်သောရထားမောင်းနှင်သူကိုငှားရမ်းရမည်။ ” ထို့အပြင် "မြို့ပြမြေအောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကိုအသုံးပြုရန်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စဉ်ဆက်မပြတ်သေချာစေရန်, လှုပ်ရှားမှုအချိန်ဇယားနှင့်အညီဆုံးဖြတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Istanbul ကိုအလွန်ချစ်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုရှာဖွေနေသည်
IMM Career စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောစုဆောင်းမှုကြေငြာချက်တွင်လျှောက်ထားသူများသည်လျှောက်ထားသောလျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များအနက်အနည်းဆုံးပထမအဆင့်အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရများသို့မဟုတ်သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျောင်းများ၏ပထမ ဦး ဆုံး၊ လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်၊ မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တာ၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊ ကွန်ပြူတာ၊ မီးရထားစနစ်များ၊
IMM Career စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသော ၀ ယ်ယူမှုကြေငြာချက်တွင်ဖော်ပြထားသောလစာပမာဏသည်ရေးသားခြင်းမရှိသော်လည်းရထားမောင်းသူများ၏နိုင်ငံသားဖြစ်သည့်ရထားမောင်းသူများ၏လစာသည်4ပေါင်တစ်သိန်းနှင့်6ပေါင်အကြားကွာခြားကြောင်းသိရသည်။ (အဆိုပါ Kamupersonel)
ရထားလမ်းလုပ်သားများန်ထမ်းများလစာ၏ဝယ်ယူမှုဆက်လက်နေချိန်မှာ 2019 တစ်နှစ်တာယခုနှစ်လည်းစပ်စုဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် TCDD န်ထမ်းများလစာရုံးထဲမှာ 2019 နှစ်ပေါင်းအဆိုအရ?
အဆိုပါ 2019 ပြည်နယ်မီးရထားခုနှစ်တွင်လုပ်ငန်းန်ထမ်းများလုပ်ခစကေးစိတ်ပိုင်းဖြတ်များအတွက်ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေကလစာပေါ်အလုပ်လုပ်လာတယ်။ အဆိုပါသမ္မတနိုင်ငံတူရကီနိုင်ငံခြားရေးမီးရထားဝန်ထမ်းများလစာတန်းနှင့်အဆင့်မြင့်အခြေခံလုပ်အားခအဆုံးအဖြတ်အပေါ်ဆက်ပြောသည်နေကြသည်။ လစာအကြေးခွံများကိုဦးမှ 2019 ပြည်နယ်မီးရထားလစာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်။
အဆိုပါထုတ်ဝေအခြေခံလုပ်အားခစကေးအရ, မူလစာမျက်နှာထောက်ပံ့ရေးစင်တာမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး, Chief Engineer, ဆရာဝန်, စာရင်းကိုင်, ရှေ့နေချုပ်, Controller, ဆောင်မှုများ Manager ကိုလက်ခံခြင်း,-ပေးပို့ခြင်းလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး, အထူးကုဆရာဝန်, အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ, လမ်းမကို Maintenance ကြီးကြပ်ရေးမှူး, ထိုကဲ့သို့သောလမ်းမကြီးဌာနခွဲဦးစီးချုပ်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများနှင့်အတူလမ်းမကြီးစက်မှုအလုပ်ရုံလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး, တူရကီသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထား, ဤလူအမြင့်ဆုံးပေးချေန်ထမ်းဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါအလုပ်သစ်başlayanavukatအတွက်ပြည်နယ်မီးရထားအသားတင်လစာ: £ 5750 က paid ဖြစ်ပါတယ်အနီး။
အသစ်စုဆောင်းအင်ဂျင်နီယာများ၏ပြည်နယ်မီးရထားအသားတင်လစာ: £ 5600 က paid ဖြစ်ပါတယ်အနီး။
အသစ်ကတပ်သားသစ်စကားပြန်၏ TCDD အသားတင်လစာ: £ 5200 က paid ဖြစ်ပါတယ်အနီး။
လူထုအခြေပြုအစေခံကျွန်၏အသားတင်လစာ၏အသစ်စုဆောင်းဘွဲ့ရပြည်နယ်မီးရထား: £ 4400 က paid ဖြစ်ပါတယ်အနီး။
အသစ်စုဆောင်းပြည်တွင်းစစ်အစေခံကျွန်၏ TCDD တွဲဖက်ဒီဂရီဘွဲ့ရအသားတင်လစာ: £ 4350 က paid ဖြစ်ပါတယ်အနီး။
TCDD အသစ်စုဆောင်းအရာရှိများအလယ်တန်းကျောင်းအသားတင်လစာဘွဲ့ရ: £ 4150 က paid ဖြစ်ပါတယ်အနီး။
အသစ်ကတပ်သားသစ်၏ပြည်နယ်မီးရထား Technician အပိုက်ကွန်ကိုလစာ: £ 4900 က paid ဖြစ်ပါတယ်အနီး။
ပြည်နယ်မီးရထားသစ်ကိုတပ်သားသစ်၏အသားတင်လစာစပယ်ယာ: £ 4700 က paid ဖြစ်ပါတယ်အနီး။
အသစ်စုဆောင်းပညာရှင်များ၏ပြည်နယ်မီးရထားအသားတင်လစာ: £ 4500 က paid ဖြစ်ပါတယ်အနီး။
TCDD Wagon နည်းပညာရှင်အသားတင်လစာ: £ 4650 ဒါဟာန်းကျင်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်
HDI လေဆိပ်ဆောက်လုပ်ရေး7တထောင်ဝန်ထမ်းရေးရာပို Make မှ
TCDD အနည်းဆုံးအထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ပြီးသည့် 363 အရာရှိအရာရှိ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှု…
ဝယ်ယူ Make မှ TCDD ပို့ဆောင်ရေး 25 န်ထမ်းများ
ဝယ်ယူ Make မှတူရကီလေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်း
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ URKUR မှဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း…
BBB ရထားမောင်းသူကို ၀ ယ်ယူခြင်း
မြေအောက်ရထားမောင်းသူ reception ည့်ခံ